'UMSINDISI' IXESHA LAMA-44 AMATHUBA ESIBINI ANOKUBAKHO KWICASTAWAYS - IINDABA
'Umsindisi' Ixesha lama-44 Amathuba esiBini anokubakho kwi-Castaways
Iakhawunti ethembekileyo yomsindisi ethe yachitha ubumdaka mva nje malunga nokuba yeyiphi imveliso yokwenziwa kwemidlalo efuna ukubuyela kwixesha elizayo labadlali ababuyayo. Nazi ezona zikhetho ziphakamileyo kwaye emva kokuba sinokubona abadlali ababuyayo.
Ii-Castaways eziPhezulu zibandakanya uNatalie Bolton, uShane Power, kunye noTeresa Cooper
Abasetyhini abahlanu abaphezulu abafunekayo kwakhona nguAngelina, uChrissy, uJanet, uNatalie kunye noT-Bird.
Amadoda ama-5 aphezulu afunekayo angamaKristu, uDomneick, uDevon, uDavie noJay.
Uve uShane njengomngcipheko. https://t.co/FuyMIgv97I
- Spoilers (@ Spoilergirl1) Julayi 29, 2021
Ngoku ka I-SpoilerGirl1 kwi-Twitter , Olunikezelo oluthembakeleyo loMsindisi kunye noBig Brother ulwazi lwangaphakathi, ezona ndawo ziphakamileyo zokufuna ukuvelisa kwakhona zezi:
Ukunyanzelwa nguDomenick , Indawo yesi-2, Ghost Island, ixesha lama-36
UNatalie Bolton , Indawo yesi-4, iMicronesia -Fans vs.Favorites, ixesha le-16
UJanet Carbin , indawo yesihlanu, Island of the Idols, ixesha lama-39
UTeresa uyasebenzisana , indawo yesihlanu, iAfrika, ixesha lesithathu
UChrissy Hofbeck , Indawo yesi-2, amaGorha vs. abaphilisi kunye neHustlers, ixesha lama-35
UChristian Hubicki , kwindawo yesixhenxe, uDavid ngokuchasene noGoliyati, ixesha lama-37
UAngelina Keeley , kwindawo yesithathu, uDavid ngokuchasene noGoliyati, ixesha lama-37
Devon pinto , Indawo yesi-4, amaGorha vs. abaphilisi kunye neHustlers, ixesha lama-35
Amandla eShane , indawo yesihlanu, iPanama-Exile Island, ixesha le-12
UDavie Rickenbacker , indawo yesithandathu, uDavid ngokuchasene noGoliyati, ixesha lama-37
UJay Starrett , Indawo yesithandathu, iMillennials vs.Gen X, ixesha lama-33
Esi sisiqalo sesamente eyomeleleyo. Obahlukeneyo baba bantu babenobuchule obuhle kwaye bangena nzulu kwezemidlalo. Sinqwenela ukongeza ukuthengisa emarikeni u-Elaine Stott noJamal Shipman ovela kwisiQithi seeIdols, uSabrina Thompson ovela kwiLizwe elinye, uHannah Shapiro osuka kwiMillennials vs. uGen X, noSean Rector waseMarquesas. Njengomntu ophawuleyo kuTwitter, singathanda ukubona uKellee Kim ovela kwiSiqithi seIdols efumana enye into, nangona kunjalo uSpoilerGirl ubhalele eso siphakamiso, andisiboni. Abafuni naziphi izikhumbuzo zikaDan, ngokubhekisele kuDan Spilo ekude kwezemidlalo.
Ixesha le-44 lelona xesha lakuqala esiya kubona ngalo abaDlali abaBuyayo
Ixesha le-43 lityekele ekubeni li-newbies. Isicwangciso okwangoku sesokuba ithuba lesibini lokugqibela lokuba lixesha lokubuya komthathi-nxaxheba nangona kunjalo linokutshintsha. #Umsindisi
I-SpoilerGirl isandula ukukhankanya ukuba i-CBS kufuneka ivuselele enye kuzo zonke izihloko zemveli zoMsindisi-Amathuba amaBini, abaFani ngokuchasene neeFavorites, okanye iGazi ngokuchasene namanzi. Njengangoku kufanelekileyo ngoku, bancike kwiCandelo lesiBini lesi-2, ke ngoko indawo ebekwe ngaphezulu kwendawo akukho mntu wenze inkulu kunakuqala.
Sele sazi ukuba amaxesha onyaka angama-41 no-42 ngabo bonke abadlali abatsha kwaye uSpoilerGirl ukhankanye ukuba ixesha lonyaka wama-43 linqwenela ukuba zii-newbies ngokufanelekileyo, ke ngoko kwangoko sinokubona ukubuya kwabadlali bexesha lonyaka li-44, elinokuba nomoya wentwasahlobo ka-2023.
Kububulumko oko. Kumaxesha angama-20 aphambili oMsindisi, bekukho kuphela amaxesha ama-4 kunye nabadlali ababuyayo, nangona kunjalo ukusukela ngoko, bekukho amaxesha ali-9 kuma-20 nabadlali ababuyayo, ukuze bayenze loo maxesha ambalwa-phantse ngalinye lahlukile. Umboniso ohamba amaxesha amathathu apheleleyo kunye nabadlali ababuyayo abangabalulekanga kweli nqanaba.
Rick and morty season 5 iphuma nini kwi hulu
Kodwa ukongeza, abanokubuyela umva banokuvela kumaxesha amathathu azo zonke izinto ezintsha, ezinokuthi zincedise ekubunjweni kwabadlali beSibini seThuba. Sikwathemba ukuba i-CBS ithathela ingqalelo kakhulu elinye igazi ngokuchasene nexesha lamanzi, nokuba ayibuyiswanga ngabadlali, njengoko benza ngexesha lokuqala, okanye ngabo bonke abantu abatsha, njengoko benzayo ixesha lesibini. Ukuba babuyile kubadlala umdlalo, iintlobo ngeentlobo zemidlalo yeqonga ngoku inabantwana abancinci ngokwaneleyo ukuba bangadlala kwaye amandla omzali nomntwana ngokuqinisekileyo ngoyena mntu uthatha ingqalelo kwiGazi ngokuchasene nexesha lamanzi. Sinqwenela ukubona abanye abadlali beqonga bebuya nembewu yabo.
Abasindileyo babuyela ngoLwesithathu, nge-22 kaSeptemba ngo-8 ebusuku. ET / PT kwi-CBS.
Izigaba: Hulu Iwiki Amazon-Prime
I-rick kunye ne-morty yexesha le-5 cast
michael hyatt ucingo
sithini isininzi seecyclops